Maxaad ka taqaan Madaxweynaha dib loo doortay ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan..? (Akhriso taariikh nololeedkiisa) – PuntSom – kalasoco wararka
Maxaad ka taqaan Madaxweynaha dib loo doortay ee Turkiga Recep Tayyip Erdogan..? (Akhriso taariikh nololeedkiisa)
in Wararka, Wararka Caalamka, Wararka Somalida June 25, 2018	88 Views
Madaxweynaha xilka haya ee dalka Turkiga ayaa mar kale ku guuleystay xilka madaxweynaha dalkaasi markii dadka dalkaasi ay u doorteen Recep Tayyip Erdogan inuu mar kale noqdo madaxweynaha dalkaasi. Waxaan halkan ku eegeynaa taariikh nololeedka madaxweynaha Erdogan.
Magaciisaoo buuxaa waa Recep Tayyip Ahmet Erdogan. Wuxuu dhashay sannadkii 1954-kii. Wuxuu ku dhashay degaanka la yidhaa Kasimpasa oo jaar la ah caasimada Istanbul. Aabihihii wuxuu ahaa askari ka tirsan ciidan ilaalada xeebaha ee Turkiga. Hooyadii oo la oran jiray Tensile waxay ahayd gabar ka shaqaysa horumarinta dumarka muslimiinta aduunka. Waxay ahayd gabar caan ku ah khudbaha iyo abaabulka bulshada. Waxay dhimatay sannadkii 2011-kii. Halka aabihii uu dhintay sannadkii 1988-kii.
– Sanadkii 1960-kii ayuu bilaabay dugsigii hoose oo ku yaallay isla-goobtii uu ku dhashay ee Kasimpasa.
– Sanadkii 1964-kii ayuu bilaabay dugsigii dhexe, waxaanu ka bilaabay magaalada Istanbul. Dugsigan wuxuu ahaa “Islamic school” amma dugsi diini ah. Qoyskooda oo aan dhaqaale haysan aw-geed wuxuu suuqa ku iibin jiray khudaarta. Waxaanu is-kaga bixin jiray lacagta dugsiga uu dhigto. Wuxuu ahaa is-koris.
– Sanadkii 1969-kii ayuu isna bilaabay dugsigii sare, waxaanu ahaa dugsi-xirfadeed diini ah (Religious vocational High school).
– Sanadkii 1974-kii ayuu galay jaamacada ku taal Turkiga. Wuxuu bilaabay inuu barto dhaqaalaha iyo ganacsiga. Markii uu jaamacada ku jiray wuxuu aad xariif ugu ahaa kubadda cagta. Waxa kale oo guddoomiye ku-xigeen ka ahaa ururuka ardayda jaamacada.
– Sanadkii 1978-kii ayuu guursaday xaaskiisa Emine Gulbaran. Waxay ku kulmeen shir caalami ah oo uu ka qayb galay, waxaana halkaasi ka bilaabay xiriirkooda. Jacayl xagiisa ka yimid ayaa keenay inay is-calfadaan. Waxay isu dhaleen laba wiil iyo laba gabdhood. Waxaa wiilasha lag kala magacaabaa: Ahmet Burak iyo Necmeddin Bilal iyo gabdhaha oo kala ah: Esra iyo Sumeyye.
– Sanadkii 1979-kii ayuu dhammaystay jaamacadii. Waxaanu bilaabay shaqadiisii ugu horaysay oo ahayd guddoomiyaha xisbiga islaamiga Qaranka garabka dhalinyarada.
– Sanadkii 1980-kii waxa dalka Turkiga ka dhacay inqilaab milatari. Waqtigaas wuxuu xubin ka ahaa xisbiga daryeel islaamka.
– Sanadkii 1984-kii wuxuu noqday guddoomiye degmo isagoo metelaya xisbiga daryeelka islaamka.
– Sanadkii 1985-kii wuxuu u dalacay guddoomiyaha degmada ugu weyn Istanbul. Isagoo xilkan hayey ilaa sannadkii 1989-kii.
– Sanadkii 1991-kii waxa loo doortay xubin baarlamaan, laakiin waa laga horistaagay inuu kursigaa ku fadhiisto. Waxaana ka mamnuucday maxkamada sare.
– Sanadkii 1994-kii ayaa loo doortay duqa magaalada istaanbuul, oo wakhtigaasi ahayd magaalada ugu weyn dhinaca ganacsiga dalka Turkiga iyo weliba yurubta bari. xilligan waxaa magaalada istaanbuul haystay dhibaatooyin kala duwan sida, biyo yaraan, ciriiri waddooyinka ah, khashin yaalla meel kasta iyo hawo wasakhow iwm.
Muddadii uu xilkaasi hayey oo ahayd 1994-kii ilaa 1998-kii wuxuu xaliyey dhammaan dhibaatadii ka jirtay magaalada Istanbuul. Wuxuuna sameeyey toddoba Buundo oo keenay in laga baxo ciriirigii waddooyinka. Shacabka reer Istanbuul ayaa u riyaaqay qorshihiisa. Taasoo keentay inay kor-u-kacdo sumcadiisu. Waxa kale oo ku guulaystay shahaado caalami ah oo ay bixiyaan Qaramada Midoobay.
– Sanadkii 1998-kii dabayaaqadiisi ayaa lagu xukumay toban bilood oo xarig ah, kadib markii ay xoogeysteen xisbigii Cilmaaniyiinta ahaa, waxaana waxba kama jiraan lagu tilmaamay Dastuurkii dalka Turkiga. Waxaana amar lagu siiyey inaanu ahayn duqa magaalada Istanbul. Waxaanu xukunkiisu dhammaaday horaantii sannadkii 1999-kii.
– Sanadkii 2001-dii ayuu aasaasay xisbiga cadaalada iyo horumarinta ( AKP)
– Sanadkii 2002-dii ayuu xisbgia cadaalada iyo horumarintu ku guulaystay saddex-meelood meel kuraasta baarlamaanka. Una dhiganta 34% cododkii la dhiibtay. Laakiin Erdogan muu noqon Raysal-wasaare, waayo muu haysan aqlabiyad uu ku noqdo Raysal-wasaare. Waxaan wakhtigaasi Raysal-wasaare noqday Cabdalla Gul.
– Sanadkii 2002-dii dabayaaqadiisi ayey maxkamada sare laashay jiritaanka doorashadii baarlamaank ee sannadkaasi dhacday, taasina waxay fursad qaali ah u noqotay Erdogan, waxaanay u suurtagalisay inuu noqdo Raysal-wasaaraha dalka Turikga. Taasina waxay ka dhigtay xisbiga ( AKP) kii ugu horeeyey ee soo dhisa dawlad xisbi keliya ah.
– Sanadkii 2007-dii doorashadii baarlamaanka ayaa la qabtay waxaana mar labaad guulaystay xisbiga Erdogan(AKP). Arrintani waxay noqotay taariikhda markii ugu horaysay muddo 52 sannadood ee xisbi laba jeer guulaysto. Waxaana mar labaad Raysal-wasaare noqday Erdogan.
– Sanadkii 2011-kii waxaa dhacay doorasho guud dalka oo dhan. Waxa mar saddexaad guulaystay xisbiga (AKP). Ka dib xisbigii ayaa mar saddexaad dib u magacaabay Raysal-wasaare Erdogan.
– Sanadkan 2013-ka waxa dalka Turkiga gaar ahaan magaalada istaanbuul ka dhacay rabashado gilgilay siyaasad Raysal-wasaare Erdogan iyo dawladiisa. Arrintan ayaa la saadaalinaayey inay u dhamaatay Raysal-wasaare Erdogan iyo mustaqbalkiisa siyaasadeed, balse wuxuu ula tacaalay si xirfad iyo dabac ku jiro, taaso soo af-jartay duufaanadii siyaasadeed ee ku kacay.
– Sanadkan 2016-ka; Wuxuu ka badbaaday isku day lagu afgembi lahaa oo naftiisa halis gashay, waxaana olole weyn lagu qaaday koox uu hoggaamiyo wadaad suufi ah oo ku nool Mareykanka, kaasoo lagu eedeeyay inuu ka danbeeyay afgembiga.
– Sanadkan 2017-ka; Wuxuu ku guuleystay in la bedelo dastuurka dala Turkiga oo loo bedelo nidaam uu madaxweynaha dalka awoodda ugu weyn leeyahay, halkii uu ka ahaa nidaam Baarlamaani ah, waxaana lagu baaqay doorashooyin lasoo hormariyey oo madaxweyne iyo Baarlamaan.
– Sanadkan 2018-ka: Wuxuu mar kale ku guuleystay doorashadii taariikhiga ahayd ee 24-ka June ka dhacday dalka Turkiga isagoo noqonaya madaxweyne awood badan leh.